Huawei wuxuu dib u dhigaa daahfurka furitaanka Mate X | Wararka IPhone
Huawei wuxuu dib u dhigaa daahfurka mar kale isku laabma Mate X
Waxay ahayd "tilaabada tiknoolajiyadeed" ee sanadka 2019: kan imaatinka aaladaha moobilka ee laaban karo. Aaladaha qaar oo umuuqda in laga soo qaatay filimka sheekooyinka sayniska tan iyo markii ay keeneen tikniyoolajiyadda shaashadda isku laaban, malaha waa mid ka mid ah caqabadaha ugu muhiimsan ee injineernimada casriga ah. Su’aashu waxay tahay Runtii ma waxaan u baahanahay tiknoolajiyad qalab gacmeed isku laaban? Dhammaanteed ma suuq geyn? Waxaan ku aragnay Samsung iyo Galaxy Fold, iyo Huawei iyo Mate X, aalado aad noo soo jiitay rubucii ugu horreeyay ee 2019 iyo inay qorsheynayeen inay bilaabaan horraanta xagaaga 2019.
Laakiin maya, daahfurka kuma imaanin dhibaatooyinka la helay awgood. Culus wuxuu ahaa kiiska Samsung oo xitaa Galaxy Fold u diray saxaafada, waxayna si dhakhso leh uga hadleen dhamaan dhibaatooyinka qalabku haystay. Huawei, ma helin inay soo dirto waxayna go'aansatay inay dib u dhigto soo-saarka si looga fogaado cayda saxaafadda. Y hadda dib ayey u dhigayaan daah-furka Mate X markale ...
Iyaguna dib uma dhigaan wax intaa ka badan oo aan ka yareyn illaa bisha Nofeembar, haddii aan dib loo dhigin mar kale ... Hordhac horey loogu sii qorsheeyay bisha Juun, ka dibna Julaay, ka dib Sebtember, iyo hadda Nofeembar ... ha ka hadlin sababta ay taasi dib ugu dhigtay daahfurka illaa Nofeembar, laakiin waxa iska cad waa taas Iyagu ma doonayaan inay naftooda nacas ka dhigaan raggii Samsung ka tirsanaa markay sameeyeen Markabkii Galaxy Fold saxaafadda iyo waxay arkeen dhammaan cilladaha qalabkan aan dhammeystirneyn uu lahaa.
Waan arki doonaa haddii labadan aalad midkood ugu dambayntii la bilaabay, waxaan u maleynayaa inay weli jirto wado dheer oo loo aado si loo arko tikniyoolajiyad shaashad isku laaban, oo sidoo kale waxaan u maleynayaa Runtii ma u baahan nahay? Waxaan ka tagi doonaa shakiga leh sii deynta mustaqbalka, waana arki doonaa soo dhaweynta ay ku dambeyn doonaan. Adiguna, ma u baahan tahay moobil isku laaban?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Huawei wuxuu dib u dhigaa daahfurka mar kale isku laabma Mate X